गुनासो ! “म नेपालमा जन्मिनु नै ठूलो भुल भएछ”!मेमोरी किङ्ग विजय शाही, एक पटक सबले पढ्नै पर्ने – Dainik Sangalo
October 29, 2020 1030
काठमाडौ । पछिल्लो चरणमा निकै भाईरल भएका बिजय शाही वि,वादमा आएका छन् ।
उनले आफ्नो खुबी कतै देखाउने ठाउँ नपाएसी पत्रकार संमेलन गरेर नै खुबी देखाउने प्रयास गरेरका थिए।
शाहीले आफुँलाई सबै भन्दा बढी शब्दहरु छिटै नै कण्ठ गरि पछि लेख्न सक्ने दाबी गरे पश्चात् मेमोरी किङ शा तर शाहीले त्यो कपोकल्पीत भ्रम,कु’प्रचार एवम् च’रित्रहत्या गरिएको भन्ने आ’रोप लगाउँदै उनले सामा’जिक संजालमा म नेपाली भएर जन्मनु नै मेरो ठूलो भए छ भनेर गुनासो पोखेका छन्।
हीको पत्रकार संमेलन भएको थियो तर मिडिया आएँ अनुसार धादली भएको ,चिटिङ गरिएको आदि इत्यादि भनिएको छ ।
“नमस्कार,म बिजय शाही”। मलाई बिश्वास छ यो स्टाटस सहि बिचारले पढ्नुहुनेछ र मेरो मर्मलाई अबस्य बुझ्नुहुनेछ।यो स्टाटस लेख्नुको कारण यो हो कि मलाई नेपाली जनताले बुझ्न गार्‍हो भको कि? मैले नेपाली जनतालाई बुझ्न गाह्रो भको हो? प्रस्न चिन्न यसमा रहेको छ।
१.पहिलो नम्बरमा म प्रती लगाउनु भएको आरोप बिजय शाहीको टुनामुना हो,जादु मन्तर हो।२.दोस्रो नम्बरमा म प्रती लगाउनु भएको आरोप, बिजय शाहीको सेटिङ हो। ३.तेस्रो नम्बरमा म प्रती लगाउनुभएको आरोप रिपोर्टर्स कलबमा चिटिङ गर्यो फेक हो,र केही नेपाली जनता र युटुबर पत्रकारहरुले मलाई गलत सोच्नुभयो।
मलाई आरोप लगाउन भन्दा एकपटक गहिरिएर सोच्न पर्ने थियो। Oxford dictionary १८७० पेजको छ तर त्यहाँ white paper मा ३-४ page छापेको थियो। हजुरहरु आफैले गहिरिएर सोच्नुस त ? के १८७० Page को Oxford dictionary ३ देखि ४ Pageमा अट्छ र ? र अर्को मैले आफैले रोजेको Page बाट लेखेको होइन नि अरुले भनेको page बाट लेखेको थिए। मैले लेख्नु अघि मेरो फोन देखि सबै चेक गरिएको थियो।
चेक गर्ने क्रममा टेबुलमा २-४ पेजमा छापेको पेपर भेटियो र तुरुन्तै नयाँ पेपर ल्याएपछि मलाई उहाँहरुले भनेकै पेज लेखेर देखाए। तर बिडम्बना,युटुबमा धेरैले भिडियोमा Demoलाई नराखी , Cut गरि गरि नराम्रो बनाई हाल्नुभयो। बिजय शाही fake भनेर नानाथरी लेख्नुभयो। सत्यलाई देखाउनुभएन।
सायद म नेपालमा जन्मेको भएर होला मेरो पहिचान कसैले गर्न सकेन न राज्य न पत्रकार न नेपाली जनता? अन्य देशमा हुन्थे भने मेरो पहिचान अबस्य गरिने थियो होला। म नेपालमा जन्मेर ठूलो भुल गरे जस्तो लाग्छ।
Prevबैसाख १२ को भन्दा ठुलो भुकम्प आउने बैज्ञानिकहरुको चेतावनी,कहिले आउने भन्ने कुरामा बाहिरियो डरलाग्दो खुलासा,पुरा पढ्नुहोस
Nextविश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जीजम्पसँग जोडिएको बलेवाको पर्यटन, स्काइ साइक्लिङलगायत साहसिक खेल सञ्चालन हुने
अचा’नक बाघ’ले झ’म्टीएर आमालाई जङ्गलतिर लगरे गयो। ब’चेर आएका छोरा भा’बुक हुदै मिडियामा।